Maarso | 2015 | WEEJIDOW
Archive for Maarso, 2015
Xildhibaano ku baaqay in loo gurmado Soomaalida ku dhibaateysan Dalka Yemen
Maarso 31, 2015
WAAJIDPRESS – 31 Mar2015:
Muqdisho – Soomaalida ku sugan Dalka Yemen oo Xaaladoodu haatan aad u adagtahay ayaa mudaneyaal ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya waxaa ay ka hadleen arimahaasi.
Xildhibaan Cali Yuusuf Cismaan, oo ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa xusay in Shacabka Soomaaliyeed ee Yemen jooga noloshoodu ay aada u cakiran tahay dhibaatooyin kala duwana ay heysato taasi oo u baahan in wax laga qabto sida uu hadalka u yiri. Waakan isagoo ka hadlaya.
Dhinaca kale, Xildhibaan Mayoow Cabdulle Korneel Ruush ayaa isna ugu baaqay Xukuumadda Soomaaliya in ay si deg deg ah wax uga qabato islamarkaana il gooni ah ay ku eegto dhibaatada Soomaalida ku heysata Dalka Yemen.
Tan iyo markii Dalka Yemen uu lugaha lagalay Dagaalo iyo Rabshado u dhaxeeya Ciidamada Dowladda Yemen iyo Mucaaradka Xuutiyiinta ayaa soo badanayay dhibaatooyinka iyo qeylo dhaanta ka soo yeereysa Soomaalida qoxootiga ku ah halkaasi taasi oo ku qotanta in hoygooda uu ku soo dhoco Madaafiic hawaaw ah iyo in si gaar ah loo beegsado.
Xaqdarada uu MAANTA maamulka Boobland suubiyey iyo sida ay beelaha u kala qaybsadeen xildhibaanada maamulka Jubba iyo cadaalad daro weyn oo lagula kacay beelaha Digil iyo Mirifle!
WAAJIDPRESS – 31 Mar 2015:
Qaybsiga xildhibaanada maamulka Jubba ee ku saleysan sadexda gobol ee Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo Gedo ayaa waxa uu u socdaa si xawli ah ayada oo ay durba meesha ka muuqato cadaalad daro ay ku kacayso beesha Absame ee goboladaas wax ka degto islamarkaasna uu ka dhashay hoggaamiyaha maamulka Jubba Sheekh Axmed Islaan (Axmed Madoobe)
Hoos ka aqriso sida beelaha ay wax u qaybsadeen gaar ahaan xildhibaanada maamulka Jubba ayada oo lagu saleynayo degmooyinka. Qeybdiga Xaq darada Ayaa ah:
Gobolka Jubbada Dhexe:
Absamed 2 xildhibaan
Jareer weyne 1
Ajuuraan 1 xildhibaan
Digil iyo Mirifle 3 xildhibaan
Absame 1 xildhibaan
Tunni/Digil iyo Mirifle 1 xildhibaan!
Sheekhaal 1 xildhibaan
Jareer weyne 1 xildhibaan!
Sade 3 xildhibaan
Digil iyo Mirifle: 1 xildhibaan
Sade 4 xildhibaan
Waxaa weli dhiman guud ahaan gobolka Jubbada Hoose oo aan weli la go’aamin sidii loo qaybsan lahaa halka gobolka Gedo ay dhimanyihiin degmooyinka Luuq, Baardheere, Ceelwaaq iyo Doolow.
Hadaba su’aasha is weydiinta mudan ayaa waxa ay tahay beel weynta Digil iyo Mirifle oo si weyn loogu dulmay gobolka Jubbada Dhexe gaar ahaan degmooyinka Bu’aale iyo Saakow, tusaale ahaan degmada Bu’aale Digil iyo Mirifle wax xildhibaano ah kama aysan helin ayada oo la ogyahay qayb ahaan degmada iyo deegaanada ku heeraarsan inay degaan beelaha DIgil iyo Mirifle halka degmada Saakow oo ay si gaar ah u leeyihiina beesha Absame 1 xildhibaan laga siiyay taasoo ah xaq daro iska cad.
Waxaa sidoo kale si weyn u dulman beelaha Jareer weyne oo gobolka Jubbada Dhexe si xoogan u dega, waxaana muuqato inay beesha Absame si gaar ah isku lahaysiisay gobolka Jubbada Dhexe inkasta oo la garanayo dhulka ay ka deganyihiin inta uu la egyahay.
Dhanka kale waxa ay cadaalad daradu ka jirtaa gobolka Gedo oo ilaa iyo hada degmooyinka Garbahaarey iyo Buulo Xaawo la qaybsaday ayada oo tusaale ahaan degmada Garbahaarey 1 xildhibaan keliya laga siiyay beelaha Digil iyo Mirifle halka degmada Buulo Xaawana aanan wax xildhibaano ah aysan ka helin oo lawada siiyay beesha Mareexaan.
Iskusoo wada duube, waxa socda haduusan maamulka Koonfur Galbeed ka hadlin oo uusan si cad ugasoo hor jeesan waxaa soo baxayo hadalkii ahaa in dhulka beelaha Digil iyo Mirifle Illaah ka dejiyay Koonfurta Soomaaliya la rabo hada in si xeeladaysan loola wareego taasoo aan suurta gal ahayn.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxa uu maamulkiisa kusoo daray beelo badan oo aan xitaa wax tuullooyin ah ku lahayn Koonfur Galbeed Soomaaliya ayada oo ay manta wasiiro ka yihiin maamulkaas dad deegaanadooda ay u jiraan gobolada Koonfur Galbeed wax ka badan 500 klm shan boqol oo kiiloo mitir halka beelaha Digil iyo Miriflana dhulkoodii la dhaxal guurinayo.
Soomaaliya ayadaa is diidan oo dowlad Dhexe inay isku xukunto diiday islamarkaasna u ol’oleysay wax la dhaho federal balse maanta waxaa muuqato in dhul beelo Soomaaliyeed degaan la rabo in beelo kale loo xalaaleeyo taasoo keenayso inuu dhibka Soomaaliya sii daba dheeraado maadaama ay dadkii Soomaaliyeed ka fogaanayaan cadaalada iyo waaqiciga dhabta ah.
Gobolka Shabeelada Hoose ayaa ay arintiisu isna weli taagantahay oo ay beelo Soomaaliyeed oo aan deegaan ahaan u dhalan gobolka rabaan inay awood ku yeeshaan oo ay si xaq daro ah ku degana gobolka.
War deg deg ah: MALAAQ iyo Xaaskiisa oo lagu dilay Magaalada Baydhabo
bad-newsMalaaq iyo Xaas uu qabay ayaa lagu dilay gudaha Magaalada Baydhaba ee Xarunta Gobolka Baay.
Malaaqa la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Malaaq Cali Cabdi Iidow,waxaana sidoo kale la dilay Xaaska uu Malaaqu qabay oo iyadana lagu magacaabi jiray Xabiiba Cismaan Isaaq.
Kooxo hubeysan ayaa xalay hoygooda ugu galay markii falka ay fuliyeen durbadiiba waa ay isaga baxsadeen goobta.
Kooxda dilka geysatay ayaan la ogeyn cida ay yihiin iyo sababta rasmiga ah ee ka dambeysa dilka ay u geysteen Malaaqaasi ku noolaa Magaalada Baydhabo.
Dilalka loo geysanaayo Odayaasha Malaaqyada ah ayaa ku soo badanaya Magaalada Baydhabo ee xarunta Gobolka Baay, wixii ka dambeeyay markii la dhisay maamulka Koonfur Galbeed ee Magaaladaasi ka dhisan.
Odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ka soo jeeda gobolka Bay ayaa cambaareeyay dil xalay loogu geystey Malaaq Cali Cabdi Iidow iyo xaaskiisa oo xalay lagu dilay gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Afhayeen u hadlay duqeyda dhaqanka Malaaq Max’ed Yacquub Malaaq Deerow ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin dilka Malaaqa iyo xaaskiisa,islamarkaana ay ku baaqayaan in si deg deg ah gacanta loogu soo dhigo dadka ka danbeeyay dilkaasi.
Malaaqa iyo xaaskiisa ayaa maanta lagu aasay magaalada Baydhabo iyadoo ay ka qeyb galeen mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur galbeed Soomaaliya.
Maamulka Magaalada Baydhabo ayaa sheegay inay wadaan baaritaan ku aadan cidii ka dambeysay dilka Malaaqa, inkastoo ilaa hada aysan sheegin cid ay u soo qab-qabteen dilka nabadoonka.
War deg deg ah: Cabdiweli Gaas “Waa Waajib Muqaddas Ah In Lasoo Celiyo Dhulalka Ka Maqan Puntland”
Madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in marnaba Puntland aanay ka harayn dhulal uu sheegay in maamulkaasi ka maqan yahay islamarkaana soo celintooda waajib tahay.
Cabdiweli Gaas oo maanta shacab iyo siyaasiin su’aalo ku weydiinayeen magaalada Garoowe ayaa ku dheeraaday ka hadalka gobalada Sool, Sanaag iyo Cayn, isaga oo sheegay in maamulkooda uu maanka ku hayo sidii uu ula wareegi lahaa gobaladaasi.
“Gobalada Sanaag, Sool iyo Cayn waxay udub dhexaad u yihiin jiritaanka Puntland, marar badanna waan ka hadlay dhulka maqan, waa waajib Muqaddas ah in lasoo celiyo dhulalka Puntland ka maqan, inta dhulkaasi maqan yahay Puntland ma noqoneyso mid kaamil ah oo jirta, waqtigeeda ayeey qaadaneysaa, laakiin ballan qaadka anagu aan sameynay waa sidii aan u ballan qaadnay, Dastuurka ayeeyna ku qoran tahay, waajibna waaye in lasoo celiyo” ayuu yiri Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
Dhinaca kale Cabdiweli Gaas ayaa soo hadal qaaday arinta ku aadan gobalka Mudug iyo sidoo kale maamul u sameynta gobalkaasi iyo Galgaduud, isaga oo sheegay in ay soo dhaweynayaa cid walba oo maamul sameysanaysa, balse aysan gorgortan ka galeyn dhul ka mid ah maamulkooda.
“Fikirka ah dadka sheeganaya qeybo ka mid ah Puntland, gaar ahaan gobalka Mudug, waad la socotaan mowqifkii adkaa ee Puntland ka qaadatay arintaasi, ka dib bishii October 14-keedii waxaan heshii halkaan kula galnay dowladda Federaalka, Cadeynaya in taako dhul ah oo Puntland leedahay ka mid noqon doonin maamulkaasi, anagu cid walba oo maamul sameysanaysa waan soo dhaweyneynaa” ayuu yiri Mdaxweyne Gaas.
Madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa xilligii uu u tartamayay xilka madaxweyne ee maamulkaasi waxa uu sheegay in gobalada Sool, Sanaag iyo Cayn kusoo celin doono awood, xilli meelo ka mid ah gobaladaasi ay ku sugan yihiin ciidanka Somaliland.
Safiirka Soomaaliya ee dalka Ethiopia Axmed Cabdisalaan oo gaaray magaalada Dhuusomareeb
WAAJIDPRESS -30 Mar 2015:
Danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Ethiopia Axmed Cabdisalaan iyo xubno kale oo isugu jiraan siyaasiyiin iyo mas’uuliyiin kale ayaa gaaray maanta magaalada Dhuusomareeb ee gobolka Galguduud.
Xubnaha wafdigan oo uu ka mid yahay wasiiru dowlaha madaxtooyada C/maan Dheere ayaan la ogeyn sababta dhabta ah ee ay halkaas u tageen hase yeeshee waxaa mas’uuliyiintan laga yaabaa in ay wadahadalo la yeeshaan qeybaha kala duwan ee duqeyda dhaqanka ee weli diidan in shirka maamul u sameynta gobolada dhexe uu ka dhaco magaalada Cadaado.
Wararka ayaa sheegaya in Axmed Cabdisalaan oo ah musharaxa ugu cadcad ee isu soo taagay xilka madaxtinimada maamul goboleedka gobolada dhexe ee dalka uu bilaabay wadahadalo uu la yeelanayo odayaasha dhaqanka, inkastoo la sheegayo in duqeyda dhaqanka haatan ay labo u kala qeybsameen qaar ka soo dabcay mowqifkoodii hore iyo kuwo weli ku dhegan mowqifka ah in shirka ay tahay in lagu qabto magaalada Dhuusomareeb.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo muddo saddex cisho ah ku sugnaa magaalada Dhuusomareeb ayaan kala soo noqon wax guul ah in uu ka dhaadhiciyoduqeyda dhaqanka inay aqbalaan go’aanka dowlada ee ah in shirka maamul u sameynta gobolada dhexe lagu qabto magaalada Cadaado.
Axmed Cabdsalaan Xaaji Aadan ayaa waxaa ka mid ah siyaasiyiin ku dhaawacantay qarax ka dhacay magaalada Dhuusomareeb bartamihii sanadkii 2012kii waxana uu xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii soo maray dalka laga soo bilaabo xilligii C/hi Yuusuf Axmed loogu doortay dalka Kenya inuu madaxweyne ka noqdo dalka Soomaaliya.
SAWIRO: MADAXWEYNAHA IYO WASIIRKA MAALIYADA Dr. FARGEETI oo si fiican loogu soo dhaweeyey MASAR – SAWIRO
Maarso 28, 2015
WAAJIDPRESS – 28 Mar 2015:
Wasiirka Maaliyada iyo Lacagta Dr. Maxamed Fargeeti iyo Wasiirka Arimaha Dibada Cabdisalaan:
Madaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo oo uu kamidyahay wasiirka maaliyada xukuumada federaalka Soomaaliya Dr. Maxamed Aadan Farkeeti ayaa gaaray magaalada xeebta leh ee Sharma Sheekh ee dalka Masar halkaasoo uu ka furmi doono shirka madaxda dalalka Jaamacadda Carabta.
Madaxweyne Xasan Sheekh iyo wafdigiisa ayaa waxaa kusoo dhoweeyay magaalada Sharma Sheekh madaxweynaha Masar Cabdalfatax Siisii ayada oo loo gelbiyay hotelkii ay ka degi lahaayeen magaalada Sharma Sheekh.
Ajandaha ugu weyn ee shirka madaxda dalalka ku jiro Jaamacadda Carabta ayaa waxa uu yahay howlgalka ay dowlada Sacuudi Carabiya hoggaaminayso ee ka dhanka ah maleeshiyooyinka Shiicada ee Xuuthiyiinta Yemen kuwaasoo qabsaday caasimada Yemen ee Sanca iyo gobalo dhowr ah.
Howlgalka ay hogaaminayso dowlada Sacuudiga ee ka dhanka ah Xuuthiyiinta Yemen ayaa waxaa qayb ka ah dalal ay kamid yihiin, Qatar, Imaaraadka Carabta, Baxreyn, Kuwait, Urdun, Sudan, Morrocco iyo Masar ayada oo ay ujeedada ugu weyna tahay sidii looga hor istaagi lahaa kooxaha Shiicada Xuuthiyiinta inay gacanta ku dhigaan magaalada labaad ee ugu weyn dalka Yemen ee Cadan oo hada saldhig u ah madaxweynaha sida saxda ah loosoo doortay ee Yemen Cabdu Rabow Mansuur Hadi.
DAAWO: RAISUL WASAARE CUMAR OO SI KULUL UGA HADLEY WEERARKII HOTELKA
Madaxweyne Xassan Oo Masar u duuley
WAAJIDPRESS -27 Mar 2015:
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo oo ka mid AH Wasiirka Maaliyada Dr. FARGEETI ayaa gaaray magaalada Sharma Sheekh ee dalka Masar, halkaasoo uu kaga qeyb galayo shirka Madaxda Jaamacada Carabta.
Wafdiga Madaxweynaha ayaa waxaa ku soo dhoweeyay magaalada Sharma Sheekh Madaxweynaha Masar C/fataax Al-Sisi, iyagoo kulan gaar ah wada qaatay.
Shir madaxeedka Jaamacada Carabta ayaa si gaar ah waxaa looga hadlayaa qalalaasaha Yemen iyo howl galka Sacuudiga hogaaminayo uu ka bilaabay dalkaas.
Dalalka Carabta ayaa taageero u muujiyay Sacuudiga, iyagoo badankood ku taageeray diyaarado dagaal iyo taageero kale, waxaana laga yaabaa in howl galkan uu qaato maalmo.
Dowladda Masar ayaa u diri doonta gacanka cadmeed maraakiib dagaal, si ay howl galka ka dhanka ah xuutiyiinta kaga qeyb qaataan.
Soomaaliya ayaa soo dhoweysay howl galka Sacuudiga hogaaminayo ka socda Yemen, waxaana dowladda Soomaaliya ay arrimaha Yemen kaga hadashay war saxaafadeed ay soo saartay.
War deg deg ah: Mas’uulkii ugu horeeyey oo hadda ku dhintey qaraxii caawa ee hotel MAKA AL- MUKARAMA
Maarso 27, 2015
WAAJIDPRESS – 27 Mar 2015:
M.weynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sh Maxamuud, Guddoomiyaha Baarlamanka Soomaaliya, R.wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Cumar C.rashiid iyo Xubnaha Labada Gole ee dowladda ayaa umadda soomaaliyeed uga tacsiyeey Geeridii ku timid Qaraxii caawa ay Alshaab ka geystey Hotel Maka Al-MUKARAMA, Wakiilka dowladda soomaaliya u fadhiya xarunta Xuquuqul Aadanaha Ee Geneve Yuusuf Maxamed Ismaaciil (Bari Bari) oo ka soo jeeda PUNTALAND iyo Farhiya haji bashir oo ka tagtey magaalada Virginia ee dalka Maraykanka- ALLAHA U NAXARIISTO.
War deg deg ah: Hotel Maka Al- MUKARAMA ee Muqdisho Oo hadda la qarxiyey iyo shabaabkii qarxiyey oo gudaha u galey hotelka caawa
Qarax xoogan ayaa goordhow ka dhacay Hotelka Maka Al-Mukarama, iyadoo qaraxa oo ahaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay laga maqlayay jugtiisa qeybo ka mid ah Magaalada Muqdisho.
Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya weerarka,wararka qaar ayaa sheegaya in qaraxa kadib kooxo hubeysan xoog ku galeen gudaha Hotelka kadibna Rasaas bilaabeen.
Qaraxa ayaa la sheegayaa inuu ka dhacay dhabarka dambe ee Hotelka, waxaana qaraxa kadib halkaasi ka dhacay rasaas xoogan oo ay rideen Ciidamada Dowlada ee ku sugnaa agagaarka Hoteelka.
Qaraxa gaariga laga soo buuxiyay kadib ayaa waxaa la maqlaayay Qarax Bam Gacmeed iyo Shabaabkii oo gudaha u galey hotelka.
Qaraxa ka dib, ayaa waxaa halkaasi laga maqlay rasaas xoogan. Wararka qaar waxay sheegayan in niman hubeysan ay gudaha u galeen Hotelka Maka Al Mukarama, isla-markaana uu iska horimaad ku dhex marayo Ciidanka Ilaalada Hotelka.
Gudaha Hotelka ayaa waxaa sidoo kale ku jira Masuuliyiin ka tirsan Dowlada Federaalka ah ee Somalia oo isugu jira Xildhibaano iyo Wasiiro.
Rasaasta weli wey socotaa Waxaa ilaa hadda dhintey ilaa 7 ruux, Mas’uuliyiinta ku dhaawacmey waxaa ka mid ah danjiraha Soomaalia u Farhiya Switzirland Yuusuf Bari Bari , Dr. Cabdi-Samad oo ka howlgala Hospital Daru-Shifa, la soco magacyada kalear dhow Ayaa idin soo gudbineynaa.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Maarso, 2015.